Al-Shabaab oo dishay afar nin oo ay ku eedaysay basaasnimo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab oo dishay afar nin oo ay ku eedaysay basaasnimo
Al-Shabaab oo dishay afar nin oo ay ku eedaysay basaasnimo
February 6, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Al-Shabaab oo dishay afar nin oo ay ku eedaysay basaasnimo. [Sawirka: Archive]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ururka Al-Shabaab ayaa meel fagaare ah ku dilay afar nin oo ay ku eedeeyeen in ay basaasiin u ahaayeen dowladda Soomaaliya, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka iyo saraakiisha Al-Shabaab.
Dilka ayaa ka dhacay fagaare kuyaala degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo qiyaastii 70 km dhanka waqooyiga kaga beegan magaalo xeebeedka Kismaayo.
“Sida ay Shareecadu qabto, maxkamad ayaa xukuntay kiiska afarta nin ee lagu dilay fagaare kuyaala gudaha degmada Jilib galabnimadii Axada,” Maxamed Abu Cabdalla, oo ah guddoomiyaha Al-Shabaab u qaabilsan gobolka Jubbada Hoose ayaa sidaa sheegay, sida ay kasoo xigatay wakaalad wararka Reuters.
Waxa uu intaas ku daray in afarta nin ay qirteen in ay ahaayeen basaasiin.
Bishii lasoo dhaafay, labo nin ayay meel fagaare ah ku toogatay Al-Shabaab kadib markii ay ku eedaysay isku-tag jinsi.
January 24, 2017 Qarax ka dhacay makhaayad kutaala magaalada Afgooye oo dilay ugu yaraan saddex qof
January 29, 2017 Ciidamada dowladda Soomaaliya oo sargaal sare oo Al-Shabaab katirsanaa ku dilay gudaha gobolka Gedo
January 24, 2017 Ciidamada Jubbaland oo dib uga qabsaday degmada Badhaadhe maleeshiyada Al-Shabaab
Bosaso-(Puntland Mirror) At least three people were killed in suicide bombing in Bosaso port town of Puntland on Tuesday evening, security officials and residents say. The suicide bomber blew up himself at security checkpoint near Towfiq junction in [...]